Wiil iyo gabar wada dhashay oo ku dhintay madaafiicdii maanta loo tuuray dhinaca Madaxtooyada Somaliya
Thursday February 16, 2017 - 13:52:06 in Wararka
Tiro madaafiic ah oo duhurnimadii maanta lagu weeraray Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia, ayaa waxay faah faahin ka soo baxeysaa khasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi.
Madaafiicdan oo ku soo daatay hareeraha Villa Somalia, ayaa waxay laba ka mida ku soo dhaceen guri ku yaala xaafadda Caga-dhiig ee Degmada Wardhiigley, waxaana ku dhimatay laba carruur ah oo wada dhalatay, iyadoo sideed kalana ay ku dhaawacantay.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay codkamuqdisho.com, ayaa yiri "Laba madfac ayaa ku soo dhacay guri ku yaala Madaxtooyada hoosteeda. Gurigan ayaa ku yaala xaafadda Caga-dhiig, waxaana ku wada noollaa laba qoys.”
"Wiil iyo gabar wada dhashay, ayaa ku dhintay madaafiicda. Laba carruur oo kale oo walaalo ay yihiin iyo hooyadoodna way ku dhaawacmeen. Qoyskii kale ee guriga la deganaa waxaa kaga dhaawacantay shan ruux, oo kala ah afar carruur oo wada dhalatay iyo hooyadood. Xilligii ay madaafiicda ku soo dhacayeen guriga waxaa ka maqnaa labada aabe.”
"Wiilka iyo gabadha ee ku dhintay madaafiicdan, ayaa waxaa dhalay nin taksiile ah oo lagu magacaabo Cali Qoobeey, oo si weyn looga garanayo Degmada Wardhiigley.”
Saraakiisha ammaanka ee ka hawlgala Magaalada Muqdisho, ayaa caadeystay in madaafiicdan ay ku tilmaamaan kuwo dheemish ah, iyadoona ay su’aashu tahay, horta dheemish wax ma dilaa?
Madaafiicdan, ayaa waxaa lagu soo beegay saacad ka dib, markii maanta uu xilka si buuxdo ula wareegay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Madaxweyne Farmaajo, ayaa intii uu waday ololihii uu ugu jiray Xafiiska Madaxtooyada, waxaa uu ballanqaaday haddii uu xilka ku guuleysto, in dowladiisu ay mag-dhow siin doonto qoysaska, dadka ay dilaan Shabaabku.